Fihaonambe G8: Mbola toerana tsara kokoa ho an izao tontolo izao? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Aogositra 2018 3:03 GMT
Nihaona tany Heiligendamm, Alemaina tamin'ny herinandro lasa ny G8 (+5). Tonga tamin'ny fifanarahana momba ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny fahantrana ao Afrika izay mety tsy ahafa-po ny ankamaroan'ny mpitsikera ny kapitalisma manerantany ireo firenena manan-karena indrindra manerantany .
Nametraka rohy tamin'ny fanehoan-kevitra avy any India, Rosia, sy Afrika tamin'ny herinandro lasa ny Global Voices. Ary nandray anjara tamin'ny hetsi-panoherana ny fivoriana ireo olona avy amin'ny faritra lavitra toy ny any Però sy Japana.
Be fanantenana kosa i Francisco Xerinda ao amin'ny bilaogy mahafinaritra AfricaVox2007, bilaogin'ireo mpanao gazety Afrikanina sivy:
Patricia Daniels, ao amin'ny bilaogy openSummit ao amin'ny openDemocracy nitatitra momba ny Fihaonambe G8 sy ny Fihaonambe Mifanindra-dalana aminy avy amin'ny fomba fijery momba ny zon'ny vehivavy. Manoro hevitra ny mpamaky izy mba tsy hisarihana hamaky ny fanambarana Fihaonambe G8. “Ahitana fanambarana manjavozavo izy ireo izay tsy mampanao na inona na inona ny G8,” hoy izy.